Ikhaya » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zokuhamba eMalta » I-SUNx Malta isungule uhambo lwemozulu enobuhlobo kwiZero
NgoSuku lwezeNdalo kwiHlabathi liphela, i-SUNx Malta ibhengeze uhambo lwayo lwemozulu ngobuhlobo kwiZero, ezihambelana noMdyarho weZizwe eziManyeneyo ukuya kwiZero.
Ukoyisa ingxaki yemozulu kuya kufuna ukuba kufezekiswe iinjongo ezingama-2050 zeZero Greenhouse Gas (GHG) ngowona mgangatho usezantsi.
Ukuxhasa i-Zero Greenhouse Gas 2050 ekujolise kuyo ngqo ngokuhambelana nenjongo ye-UN Paris 1.5.
I-SUNx Malta iza kusebenza neenkampani kunye noluntu ukubanceda baphuhlise uzinzo kunye nezicwangciso zemozulu zokufezekisa i-Absolute Zero GHG.
Ngokusekwe kwisayensi yamva nje, a Ithagethi ka-2050 yeZero yeGesi yeGreenhouse (GHG) Ubuncinci ekugqibeleni iyafuneka ukubetha iCrime Clisis ekhoyo. Ngokukhuthaza a UZero GHG 2050 Ukujolisa kuthatha umgca ngqo kwiinjongo ze-UN Paris 1.5. Ukuqala ngoku.
Nangona kunjalo, ukuqonda net carbon engathathi hlangothi yinto yanamhlanje, ngaphakathi KWELANGAx Malta Imozulu yobuhlobo yokuHamba ukuya kwiZero Isakhelo, siya kusebenza neenkampani kunye noluntu ngokudlula kuyo ICandelo loBhaliso lweCFT kunye Iimbaleki ezinamandla zemozulu, ukubanceda baphucule uzinzo kunye nezicwangciso zemozulu eziguqula ixesha ukusuka kwiNet Zero Carbon ukuya kwiAbsolute Zero GHG.
UNjingalwazi Geoffrey Lipman uthe: “Inzululwazi isixelela ukuba siphantse safikelela kwi-1.2o ngokubhekisele kwiithagethi zesiVumelwano saseParis namhlanje kwaye zisingise kwi-3-5o ukwanda ngo-2050. Inokuba yintlekele ekhoyo, kunye nemozulu egqithileyo ekhokelela ekwandiseni imililo, izikhukula, imbalela, kunye neembaleki zemozulu.
"NGELANGAx Malta, sithatha indawo ephezulu ukuxhasa isayensi. Sikholelwa ngamandla ukuba uKhenketho oluHlobo lwemozulu (i-CFT) -Carbon ephantsi: I-SDG idityanisiwe: IParis 1.5o, yeyona ndlela ibalaseleyo yokuHamba noKhenketho ukungena kwi-UN 2030/2050 Roadmap yekamva eliluhlaza nelicocekileyo labantwana bethu. UNobhala-Jikelele we-UN u-Antonio Guterres ucele ukuba zonke ezoKhenketho zibangelwe yindyikitya yokufa kwaye zizinzile. I-CFT iya kunceda ukuhambisa oko.